ကျောင်းသားအတွက်ဆရာ၀န်ဆေးလက်မှတ်တောင်းခြင်း - intouchmedicare
ကျောင်းဆက်တက်ဖို့အတွက်သည် ကျောင်းကသတ်မှတ်ထားသောစာရင်းအတိုင်းကိုစစ်ဆေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါသည်၊ပုံမှန်အားဖြင့် ၅မျိုးရောဂါရှိဆေးလက်မှတ်ဖြစ်ပါသည် ၊ ကျောင်းဆက်တက်ရန်ဆရာ၀န်ဆေးလက်မှတ်သည်ဘာတွေစစ်ရမလဲဆိုတာသွားကြည့်ရအောင်-
ဆေးလက်မှတ်ဆိုသည်မှာ သင်သည်ကျန်းမာရေးတကယ်၀င်စစ်ဆေးပြီးကျောင်းကသတ်မှတ်ထားသောစာရင်းအတိုင်းရောဂါမရှိကြောင်းကိုသက်သေပြထားသောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ဆေးကောင်စီ၏ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ရှိသောဆရာဝန်မှထုတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဆေးလက်မှတ်သည် အလုပ်ခွင့်ပြုရန်ဆေးလက်မှတ်၊ နိုင်ငံခြားခရီးသွားရန်ဆေးလက်မှတ်၊ အလုပ်လျှောက်ရန်ဆေးလက်မှတ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက်ဆေးလက်မှတ် အမျိုးမျိုးအတွက်သုံးနိုင်သည်။ ကျောင်းဆက်တက်ရန်အတွက်ဆေးလက်မှတ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါသည်
ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတွင်ပညာသင်ကြားမည့်သူများအတွက် ကျောင်းဆက်တက်ဖို့ဆေးလက်မှတ်ရရှိရန် Intouch Medicare ဆေးခန်းတွင် အောက်ပါ စာရင်းများနှင့်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုရယူနိုင်ပါသည်။
မိမိ၏ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်‌စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းနှင့်ဆရာ၀န်ထံမှခန္ဓာကိုယ်စစ်ဆေးခြင်း / Physical Examination
သွေးဖိအား၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ အလေးချိန်၊ အမြင့်တိုင်းတာခြင်း / Vital Signs
အသည်းရောင်ရောဂါ (ပိုးဘီ)စစ်ဆေးခြင်း / HBsAg
အရောင်မျက်မမြင်စမ်းသပ်ခြင်း / Color Blind Test
1. အနာကြီးရောဂါ / Leprosy
2. တီဘီရောဂါ / Advanced Pulmonary Tuberculosis
4. နာတာရှည်အရက်စွဲရောဂါ / Chronic alcoholism
5. ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ / Elephantiasis များတို့ဖြစ်ပါသည်။
စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းသည် ဆရာ၀န်သည် သင်အမှန်တကယ်ကျန်းမာရေး၀င်စစ်ဆေးသည်ဟုအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။ ထို့နောက် ထုတ်ပေးသောဆေးလက်မှတ်သည် လာစစ်ဆေးသောနေ့ကမှစ၍ ရက် ၃၀ သာလျှင်ကြာရှည်ခံသည်။ဆေးလက်မှတသည် ကျောင်းဆက်တက်ရန်အတွက်သုံးနိုင်ပြီးလွှဲ၍ နောက်ထပ်ပြည်တွင်း သို့မဟုတ် ပြည်ပ မှာကျောင်းဆက်တက်ဖို့ရန်အတွက်လဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။၎င်းသည်နောက်ထပ်စစ်ဆေးဖို့ရန်လိုပါကသင်တက်တဲ့ကျောင်းပေါ်မူတည်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည် သင်ကျန်းမာရေးအမှန်တကယ်၀င်စစ်ဆေးသည်ဟုအတွက်သုံးပါသည်။ထိုသာမက သင်သည်ရောဂါမှအမှန်တကယ်ပျောက်ကင်းပြီးကျောင်းကိုပုံမှန်အတိုင်းသွားနိုင်သည်ကိုလဲအသိအမှတ်ပြုပေးသောစာရွက်စာတမ်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကျောင်းဆက်တက်ဖို့အတွက်ဆေးလက်မှတ်ရရှိရန်ဆေးစစ်ခြင်းသည်Intouch Medicare ဆေးခန်းတွင် အဆင်ပြေပြီးတိကျသောရလဒ်များရရှိပြီးကျွမ်းကျင်သောဆရာဝန်များနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောသူနာပြုများထံ ခေတ်မီသောကိရိယာများဖြင့်ပြုလုပ်ပေး၍ မြန်ဆန်တဲ့အဆင့်တွေရရှိပါမည်။ ရည်ရွယ်ထားသောအသုံးပြုမှုအတွက်မှန်ကန်သောရလဒ်များရရှိလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ စိတ်၀င်စားသူများသည်အိမ်နှင့်နီးသောဌာနတိုင်း Intouch Medicare ဆေးခန်းကို မေးမြန်း နိုင်ပြီး (သို့) အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းကို Google ထဲ၌ရှာနိုင်ပါသည်။